कोरोना संक्रमणबाट वरिष्ठ चिकित्सक मुडभरीको निधन Canada Nepal
कोरोना संक्रमणबाट वरिष्ठ चिकित्सक मुडभरीको निधन
काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट एक चिकित्सकको निधन भएको छ । निधन हुनेमा ७८ वर्षीय वरिष्ठ चिकित्सक डा. ध्रुव शर्मा मुडभरी रहेका छन् ।
उनको शनिवार दिउँसो ओम अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो । डा. मुडभरीलाई ९ दिनअघि कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको थियो ।
ओम अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका उनको आज आइसियुमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो । उनको निधनले ओम अस्पतालले दुख व्यक्त गरेको छ ।
मंसिर ६, २०७७ शनिवार २०:०७:४५ बजे : प्रकाशित